उपभोग्य सामाग्रीको मूल्य बृद्धिमा सरकारको कार्यशैलीमै दोष ! « NBC KHABAR
उपभोग्य सामाग्रीको मूल्य बृद्धिमा सरकारको कार्यशैलीमै दोष !
काठमाडौं, २९ असोज । उपभोग्य सामाग्रीको मूल्य आकाशिएको छ । व्यापारीकै भनाईलाई मान्ने हो भने पनि २० देखि २५ प्रतिशतसम्म मूल्य बृद्धि भएको छ । सरकारले बजार नियन्त्रण गर्न खोजेकै कारण मूल्यवृद्धि भएको कतिपयको बुझाई छ भने कतिपयले अनुगमनमा कडाईं गर्न नसकेको बताउने गरेका छन् ।
आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को सुरुबाटै उपभोग्य सामाग्रीका मूल्य बढ्दै गएको छ । चाडवाडसम्म आइपुग्दा मूल्यबृद्धिले उपभोक्तालाई थप मार पारेको छ । खाद्यान्न, चिनी, लत्तकपडा जस्ता सामाग्रीमा बढेको मूल्यले निम्न आय भएकाको दैनिकीमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्दै लगेको छ । सरकारले भन्सार दर बढाउने, त्यसमा स्थानीय तहले कर थप्ने गर्दा मूल्य आकाशिएको एकथरीको तर्क छ । कालोबजारी मौलाउँदा बजार भाउ अनियन्त्रित बनेको छ ।
डलरमा भएको मूल्य बृद्धि, पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्य बृद्धि अर्को कारण हो । सरकारको कार्यशैलीले कालोबजारी बढेको व्यापारीको तर्क रहेको छ । भन्सार दर बढ्दा आयात हुने सामाग्रीमा तत्काल असर परेको भनाई पनि आएका छन् । यसैलाई आधार बनाएर कतिपयले कालोबजारी गरेका छन् ।
पछिल्लो समय चिनी लगायत दैनिक प्रयोग हुने उपभोग्य सामाग्रहीको मूल्य नियन्त्रण गर्न सरकार असफल भएको निश्कर्षमा दम देखिएको छ । भन्सार वृद्धि दर बढाउँदा कालोबजारीको चलखेल ठूलो समस्या बनेको छ । कालोबजारी नियन्त्रण नहुने हो भने अझ मूल्य बृद्धिको सम्भावना रहेको व्यापारीहरुकै भनाई छ ।